Hafanàm-po nomerika · Novambra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Hafanàm-po nomerika · Novambra, 2019
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Novambra, 2019
Anatin'ny fibahanana ny aterineto ao Kashmir: Tatitra an-dahatsary niarahana tamin'ireo Kashmiri mpianatra idonan'ilay krizy
Azia Atsimo 29 Novambra 2019
Anatin'ny fanapahana tanteraka ny aterineto ao amin'ny faritra no hiatrehan'ireo 48.000 mpianatra amin'ny kolejy ao Kashmir ny fanadinam-panjakana
Amerika Latina 28 Novambra 2019
Shina: “tsy liana amin'ny resaka politika aho, ny vola irery ihany no mahaliana ahy”
Azia Atsinanana 27 Novambra 2019
Ny hoe tsy liana amin'ny politika aho dia tsy midika akory fa tsy miraharaha an'io aho... Manaraka izany, hampiasa ny volako amin'ny fnaovana asa soa aho. Toy Izay no làlana nofidiako, ary ianao mba ahoana, ry namako?
Tsy misy paradisa ho an'ny mpanao gazety olon-tsotra ao Bahrain
Nalaza ny lahatsary "Famoretana" nataon'ny polisy ao Bahrain, namoaka fanambarana ny minisitry ny atitany: "izay rehetra maka sary hetsika dia tokony hitatitra izany avy hatrany" any amin'ny manampahefana. Roa andro aoriana, sy mifanohitra amin'izany fanambarana izany, maro ireo tezitra tamin'ny vaovao momba ny fisamborana ilay mpanao gazety mpaka sary.
Tanora te-hanampy ireo iharan'ny herisetra an-tokantrano ao Albania amin'ny alàlan'ny fampiharana vao noforoniny
Eoropa Afovoany & Atsinanana 19 Novambra 2019
Fampiharana iray mampifandray ireo efa sisampatin'ny herisetra an-tokantrano aminà toeram-pialofana, ny polisy ary ireo vondrona mpanohana.
Toherin'ireo mpikatroka aterineto ao Hong Kong ho toy ny fandrahonana ny fahalalahana antserasera ny fandràran'ny fitsarana ny votoaty ‘mahery sehatra’
Azia Atsinanana 18 Novambra 2019
Manohitra ny fehezan-dalàna vonjimaika navoakan'ny Fitsarana Avo ireo mpikatroka ho an'ny fahalalahana antserasera any Hong Kong, fehezan-dalàna izay mandràra ny olona handefa sy mamerina mandefa izay vaovao mampiroborobo herisetra, tafiditra amin'izany izay alefa ao amin'ny LIHKG sy Telegram.
Kiobà sy Etazonia : latsabato hanaovana fahirano
Amerika Avaratra 18 Novambra 2019
... tao amin'ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana, nofidian'ny maro an'isa ny fanaisorana ny fahirano ara-toekarena napetrak'i Etazonia efa ho dimy amby efapolo taona atao amin'i Kiobà ambany fitarihan'ireo kaominista. (…) Ary mba manao ahoana izao ireo FIFIDIANANA MALALAKA sy ny DEMAOKRASIA ?
Amerika Avaratra 17 Novambra 2019
Fihetsiketsehana tao Beiroty nomem-boninahitra tanaty sarintany maneho ny hetsipanoherana ho toy ny dingana ‘fanorenana tanàna’ mivantana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Novambra 2019
“ Fanampiny lehibe ho an'ny "magma" hita maso miantefa amintsika ireo sarintany ireo, satria ahafahantsika mamintina, misaintsaina ary mametraka ny zavatra maro ho anaty vinavina."